विदेशमा कोरोनाले लियो ३७२ नेपालीको ज्यान, कति भए संक्रमित ? – PathivaraOnline
Home > प्रवास > विदेशमा कोरोनाले लियो ३७२ नेपालीको ज्यान, कति भए संक्रमित ?
admin April 27, 2021 प्रवास	0
एजेन्सी । कोरोनाका कारण एक वर्षमा २१ मुलुकमा रहेका ३ सय ७२ नेपालीको मृत्यु भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अनुसार पछिल्लो एक सातामा भारतमा मात्रै २० जना नेपालीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ । पछिल्लो एक सातामै भारतमा २०, कुवेतमा २ र कतारमा १ जना नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनु परेको गैरआवासीय नेपाली संघको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनले पछिल्लो समय भारत लगायतका विभिन्न मुलुकमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरस महामारीको प्रकोपका कारण मृत्युदर बढेको समेत बताए  । नयाँदिल्लीमा मात्रै १० जना र भारतका अन्य क्षेत्रमा थप १० जना नेपालीको निधन भएको हो । निधन हुनेमा अधिकांश ५० वर्षभन्दा मुनिका छन् । योसँगै हालसम्म विश्वका विभिन्न २१ मुलुकमा संक्रमणका कारण ३ सय ७२ जना नेपालीको निधन भएको छ । हालसम्म मृत्यु भएकामध्ये २ सय ४५ जना मध्यपूर्वका रहेका छन् ।
गत वर्षको जुन, जुलाई, डिसेम्बर र यो वर्षको जनवरी महिनामा सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका थिए । संयोजक सापकोटाका अनुसार महामारीका दौरान २ सय ५० जना डाक्टर र नर्सहरू परिचालन गरिएको जानकारी दिए । नेपालबाहिर करिब ५ हजार डाक्टर र १५ हजारको हाराहारीमा नर्सहरू रहेका छन् । ती सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई एनआरएनमा जोड्न प्रयास भइरहेको समेत सापकोटाले बताए ।
विवाह गरेको एक वर्षमै गायिका जेरी र उनको श्रीमानलाई पर्यो यतिठूलो आपत, रुँदै दुवैजना आए मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)
दुबईमा श्रीमति पाकिस्तानीसंग मोजमस्तीमा, श्रीमानको गुहा’र ‘कि छाड उसलाई कि मा’र मलाइ’
कुवेतबाट आयो यस्तो दुःखद खबर, किन यस्तो गर्छन नेपालीहरू परदेशमा?